The ozi ọma na-abịa na gam akporo Wear 2.6. ka smartwatch | Gam akporosis
Android Wear 2.6: Akụkọ ndị na-abata na mmelite ọhụrụ ahụ
La ohuru nke sistemụ arụmọrụ maka elele anya dị ugbu a. Ọ bụ ihe 2.6 Weebụ Weebụ. nke bụ mmelite ọhụrụ nke na-abịa mgbe gam akporo Wear 2.0. Dị ka ọ dị na mbụ na mmelite ọ bụla, akụkọ na-abịarute na Anya Smart. Ihe ohuru ohuru nke kwere nkwa ime ka aru oru nke sistemu di nma.
Na mkpokọta mmelite a na-ahapụ anyị mgbanwe ise. Offọdụ ndị dị mkpa karịa ndị ọzọ, ma ha niile mere nke mere na onye ọrụ ahụmahụ bụ ihe kasị mma kwere omume. Maka ndị nwere smartwatch gam akporo, ugbua enwere ike imelite site na Google Play. Kedu akụkọ nke mmelite a na gam akporo Wear 2.6 na-ahapụ anyị?
Os anyị na-akọwapụtakwu nke ọma akwụkwọ akụkọ ise ndị a na - abịa na mmelite ahụ. Ya mere, anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na akwụkwọ akụkọ ndị a mezuru atụmanya nke ndị ọrụ na-eji elele anya smart gam akporo.
1 Hà nke ificationsma Ọkwa adapts
2 View njikọ njikọ
3 Mgbochi ogbugbu mma
4 Download usoro ihe ngosi
5 Adịbeghị anya na okirikiri
Hà nke ificationsma Ọkwa adapts
Oge na-abịa ọ ga-adị mfe ma nwekwuo nkasi obi ịnwe ike ịgụ ozi ngosi na-abata na nche. Ha ga-emegharị. Kpọmkwem, ọ bụ ederede ederede ka a ga-emegharị ruo n'ogologo ozi ahụ. Yabụ na ọ dị mma maka ndị ahụ ozi ogologo oge. Ebe ọ bụ na ugbu a ogologo oge ozi nwere ike inwe otu akara ọzọ. Ya mere, ahapụghị anyị na-ahụghị akụkụ nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ.
View njikọ njikọ
En Gam akporo Wear 2.6, mgbe anyị wedara mkpịsị aka anyị ala iji hụ ntọala ngwa ngwa anyị ga-enwe ike ịhụ ọkwa nke WiFi, njikọ Bluetooth. ma ọ bụ data mkpanaka site na nche. Azọ dị mfe iji hụ ọkwa nke njikọ ahụ na-enweghị ịmegharị ọtụtụ oge.
Mgbochi ogbugbu mma
Versiondị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ na-ewetakwa a mmelite na mmegharị ahụ. Mmegharị ahụ dị ka ogologo pịa na mpempe akwụkwọ mkpịsị aka nke aka anyị na-eme n'amaghị ama. Wayzọ a, site ugbu a gaa n'ihu ọ gaghị enwe mmetụta ọsọ ọsọ. N'ihi ya, ọ gaghị emeghachi omume ngwa ngwa na mmegharị ahụ anyị na-eme.
Download usoro ihe ngosi
Mgbe anyị na-ebudata ngwa ma ọ bụ otu emelitere anyị ga-enweta usoro egosi. E wezụga inwe ike ịhụ oge fọdụrụ n'elu nbudata. Yabụ na anyị nwere ike ịhụ n'oge niile na steeti ebudatara ya.
Adịbeghị anya na okirikiri
Site na ụdị sistemụ arụmọrụ gara aga anyị nwere nhọrọ hazie ihu nche. Ugbu a 2.6 Weebụ Weebụ na-enye anyị nhọrọ iji hụ ngwa ngwa kachasị nso. Nke ikpeazụ anyị meghere. Yabụ ọ bụrụ na anyị emechiela ya na ndudue, ọ ga-adị mfe ịlaghachi na ya.
Ndị a bụ atụmatụ ọhụrụ ise ndị nwere mmelite a. Maka ndị niile chọrọ ya, ha ga-ama ya melite gam akporo Wear 2.6 ozugbo na Storelọ Ahịa Play.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Android Wear 2.6: Akụkọ ndị na-abata na mmelite ọhụrụ ahụ
Project Dragon maka gam akporo - Nyochaa
UC Browser laghachiri na Google Play